Numbness and tingling of limbs - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ခွထေောကျမြား လကျမြား ထုံကဉျြခွငျး
ထုံကဉျြခွငျးဆိုတာ.. လူခန်ဓာကိုယျ တဈခုလုံးမှာ ဖွဈပျေါနိုငျတဲ့ sensation(ခံစားမှု) တဈခုပါ.. သို့သျော မြားသောအားဖွငျ့ ခွခြေောငျး လကျခြောငျးတှေ ၊ လကျမောငျးနဲ့ ခွထေောကျ စတာတှမှော ပိုသတိထားမိတတျကွပါတယျ..ဥပမာ- တငျပလ်လငျ ခြိတျကွီး အကွားကွီး ထိုငျမိခွငျး၊ တဈနရောတညျးမှာ အကွာကွီးရပျနရေခွငျး၊ လကျမောငျးပျေါ ခေါငျးအုံးအိပျမိခွငျးတှေ နောကျမှာ ခွလေကျတှကေို သှေးလညျပတျမှု နညျးတာကွောငျ့ ခတ်ေတထုံကဉျြခွငျးကို ခံစားရလရှေိ့ပါတယျ…
တဈခါတဈလမှော ထုံကဉျြခွငျးဟာ အကွောငျးကိစ်စရပျမရှိပဲနဲ့ ကွာရှညျနမေယျ..ဆိုရငျ သတိထားစရာပါပဲ…အရငျက ထိခိုကျဒဏျရာ ဖွဈထားဖူးတာကွောငျ့ အာရုံကွောတှကေို ထိခိုကျမိတာမြိုး ဖွဈနိုငျပါတယျ.. ဥပမာ- multiple sclerosis (ဦးနှောကျနဲ့ အာရုံကွောမ ထိခိုကျထားခွငျး) ၊ carpel tunnel syndrome (လကျတှငျးရှိ အာရုံကွော ထိခိုကျထားခွငျး) စတာတှကွေောငျ့ ကိုယျ့ကို ထိမှနျး နာမှနျး မသိတာမြိုးတှေ ဖွဈတတျပါတယျ…
တခြို့သော ဆေးတှဟောလညျး ထုံကဉျြလွငျးကို ဖွဈစနေိုငျပါတယျ…
ဒါပွငျ တခါတရံမှာ အကောငျကိုကျတာကွောငျ့ ကိုကျခံရတဲ့နရော လကျ (သို့) ခွတှေမှော ထုံကဉျြခွငျး..အစားအသောကျကွောငျ့ဖွဈစေ၊ခေါငျးတဈခွမျးကိုကျခွငျး …ဓာတျရောငျခွညျဖွငျ့ ကုသခွငျးတှကွေောငျ့လဲ ခွလေကျတှမှော ထုံကဉျြခွငျးတှလေဲ ဖွဈတတျပါတယျ..ခန်ဓာကိုယျတှငျးဓာတျမြား ( ဗီတာမငျ၊ကယျစီယမျ၊ ဆိုဒီယမျ) အစရှိတာတှေ ခြိုတဲ့တဲ့ အခါမှာလညျး ကွုံရလရှေိ့ပါတယျ..
ပွောခဲ့သလို အရငျက ထိခိုကျမှု ရှိခဲ့ဖူးလို့ မိမိရဲ့ အာရုံကွောမကွီးကို အရိုးတဈခုမှသှားဖိမိခွငျး၊ ညှပျနခွေငျး စတာတှကွေောငျ့လဲ ဖွဈတတျပါတယျ.. ခန်ဓာကိုယျရှိတဈသြှူးတှထေိခိုကျပွီး အမာရှတျဖွဈတာတှေ၊ ကငျဆာအလုံးတှေ၊ရောဂါအကြိတျတှေ၊ သှေးကွောထုံးတှကေနလေညျး အာရုံကွောတဈခု (သို့) အမြားကွီးကို သှားဖိမိတဲ့အခါမြိုးမှာလညျး ကွုံရနိုငျပါတယျ..
တခြို့သော ဆီးခြိုရောဂါရှိသူမြား၊ လဖွေတျဖူးထားသူမြား၊ အတကျရောဂါရှိသူမြား၊ thyroid (လညျပငျးအကြိတျ)ရောဂါရှိသူမြားမှာလဲ ဒီလို ပွသနာမြား ကွုံရလရှေိ့တတျပါတယျ..တဈစုံတဈခုကွောငျ့ ထိခိုကျမိပွီး အရပွေားထိခိုကျခွငျး၊ ယောငျခွငျး ၊ ပွတျရှခွငျးတှမှောလညျး အာရုံကွောပါသှားပါကလညျး ထုံကဉျြတတျပါတယျ..
လူတိုငျး ထုံကဉျြခွငျးကို ခံစားဖူးကွပါလိမျ့မယျ..သို့သျော မိမိဟာ သာမနျ အကွာကွီးထိုငျမိတာ ၊ လကျမောငျးပျေါအိပျမိတာမြိုးကွောငျ့ ထုံကဉျြတာမဟုတျပဲ တဈခုခုကွောငျ့ ဦးခေါငျး၊ လညျပငျးနဲ့. နောကျကြောတှမှော ထိခိုကျထားဖူးတာမြိုးကွောငျ့ ထုံကဉျြမယျ၊ ထိမှနျး ကိုငျမှနျးမသိတာမြိုး ဖွဈမယျ၊ ခဏ သတိမသှေ့ားတာမြိုး၊စကားလုံးမကှဲခွငျး၊ခေါငျးနှောကျခွငျး၊အမွငျအာရုံဝါးခွငျး၊ခွလေကျအားနညျးခွငျး၊ ဆီးဝမျးမနိုငျခွငျး၊ကိုယျလကျနာကငျြခွငျးတှတေို့နဲ့ တှဲပွီး တဈစုံတဈရာ ရှိခဲ့မယျဆိုပါက ဆရာဝနျနဲ့ ပွပွီး ကုသသငျ့ပါတယျ…
သို့မှသာ လိုအပျသော ခန်ဓာကိုယျ ကွံ့ခိုငျမှုစဈဆေးခွငျး ဓာတျခြို့တဲ့မှု စဈဆေးခွငျး၊ အာရုံကွောနဲ့ဆိုငျသော လကေ့ငျြ့မှုမြား ပွုလုပျခွငျးတှအေပွငျဓာတျမှနျရိုကျခွငျး၊ သှေးကွောဓာတျမှနျကွညျ့ခွငျး၊ CT scan ရိုကျခွငျး၊ ultrasound ကွညျ့ခွငျး အစရှိတဲ့အရာတှနေဲ့ မိမိ၏ ကနျြးမာရေးပွသနာကို သခြောအဖွရှောနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ
မိမိထိခိုကျထားသော၊ အားနညျးသော အစိတျအပိုငျး(သို့)ရောဂါနဲ့ လိုကျပွီး လိုအပျသော ကုသမှုတှပွေုလုကျရမှာ လူတဈဦးခငျြးစီလိုကျပွီး ကုသရသော နညျးလမျးမြား၊ဆေးစဈခွငျးမြားနဲ့ ပြောကျကငျးမှု နှေးခွငျး မွနျခွငျးတှဟော ကှဲပွားသှားမှာ ဖွဈပါတယျ..
ဒါကွောငျ့ မိမိဟာ အမွဲ သတိခပျြနမှေသာ မိမိရဲ့ ဖွဈလာမယျ့ ရောဂါမြား အန်တရာယျမြားကို ကာကှယျနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ…
ကနျြးမာ သနျစှမျးပွီး စိတျသှားတိုငျးကိုယျပါနိုငျကွပါစလေို့ တောငျးဆု မတ်ေတာပွုလကျြ….
​ခြေ​ထောက်​များ လက်​များ ထုံကျဉ်​ခြင်း
ထုံကျဉ်​ခြင်းဆိုတာ.. လူခန္ဓာကိုယ်​ တစ်​ခုလုံးမှာ ဖြစ်​​ပေါ်နိုင်​တဲ့ sensation(ခံစားမှု) တစ်​ခုပါ.. သို့​သော်​ များ​သောအားဖြင့်​ ​ခြေ​​ချောင်း လက်​​ချောင်း​တွေ ၊ လက်​​မောင်းနဲ့ ​ခြေ​ထောက်​​ စတာ​တွေမှာ ပိုသတိထားမိတတ်​ကြပါတယ်​..ဥပမာ- တင်​ပလ္လင်​ ချိတ်​ကြီး အကြားကြီး ထိုင်​မိခြင်း၊ တစ်​​နေရာတည်းမှာ အကြာကြီးရပ်​​နေရခြင်း၊ လက်​​မောင်း​ပေါ် ​ခေါင်းအုံးအိပ်​မိခြင်း​တွေ ​နောက်​မှာ ​ခြေ​လက်​​တွေကို ​သွေးလည်​ပတ်​မှု နည်းတာ​ကြောင့်​ ​ခေတ္တထုံကျဉ်​ခြင်းကို ခံစားရ​လေ့ရှိပါတယ်​…
တစ်​ခါတ​စ်​​လေမှာ ထုံကျဉ်​ခြင်းဟာ အ​ကြောင်းကိစ္စရပ်​မရှိပဲနဲ့ ကြာရှည်​​နေမယ်​..ဆိုရင်​ သတိထားစရာပါပဲ…​အရင်​က ထိခိုက်​ဒဏ်​ရာ ဖြစ်​ထားဖူးတာ​ကြောင့်​ အာရုံ​ကြော​တွေကို ထိခိုက်​မိတာမျိုး ဖြစ်​နိုင်​ပါတယ်​.. ဥပမာ- multiple sclerosis (ဦး​နှောက်​နဲ့ အာရုံ​ကြောမ ထိခိုက်​ထားခြင်း) ၊ carpel tunnel syndrome (လက်​တွင်းရှိ အာရုံ​ကြော ထိခိုက်​ထားခြင်း) စတာ​တွေ​ကြောင့်​ ကိုယ့်​ကို ထိမှန်း နာမှန်း မသိတာမျိုး​တွေ ဖြစ်​တတ်​ပါတယ်​…
တချို့​သော ​ဆေး​တွေဟာလည်း ထုံကျဉ်​လြင်းကို ဖြစ်​​စေနိုင်​ပါတယ်​…
ဒါပြင်​ တခါတရံမှာ အ​ကောင်​ကိုက်​တာ​ကြောင့်​ ကိုက်​ခံရတဲ့​နေရာ လက်​ (သို့) ​ခြေ​တွေမှာ ထုံကျဉ်​ခြင်း..အစားအ​သောက်​​ကြောင့်​ဖြစ်​​စေ၊​ခေါင်းတစ်​ခြမ်းကိုက်​ခြင်း …ဓာတ်​​ရောင်​ခြည်​ဖြင့်​ ကုသခြင်း​တွေ​ကြောင့်​လဲ ​ခြေလက်​​တွေမှာ ထုံကျဉ်​ခြင်း​တွေလဲ ဖြစ်​တတ်​ပါတယ်​..ခန္ဓာကိုယ်​တွင်းဓာတ်​များ ( ​ဗီတာမင်​၊ကယ်​စီယမ်​၊ ဆိုဒီယမ်​) အစရှိတာ​တွေ ချိုတဲ့တဲ့ အခါမှာလည်း ကြုံရ​လေ့ရှိပါတယ်​..
​ပြောခဲ့သလို အရင်​က ထိခိုက်​မှု ရှိခဲ့ဖူးလို့ မိမိရဲ့ အာရုံ​ကြောမကြီးကို အရိုးတစ်​ခုမှသွားဖိမိခြင်း၊ ညှပ်​​နေခြင်း စတာ​တွေ​ကြောင့်​လဲ ဖြစ်တတ်​ပါတယ်​.. ခန္ဓာကိုယ်​ရှိတစ်​သျှူး​တွေထိခိုက်​ပြီး အမာရွတ်​ဖြစ်​တာ​တွေ၊ ကင်​ဆာအလုံး​တွေ၊​ရောဂါအကျိတ်​​တွေ၊ ​သွေး​ကြောထုံး​တွေက​နေလည်း အာရုံ​ကြောတစ်​ခု (သို့) အများကြီးကို သွားဖိမိတဲ့အခါမျိုးမှာလည်း ကြုံရနိုင်​ပါတယ်​..
တချို့​သော ဆီးချို​​ရောဂါရှိသူများ၊ ​လေဖြတ်​ဖူးထားသူများ၊ အတက်​​ရောဂါရှိသူများ၊ thyroid (လည်​ပင်းအကျိတ်​)​ရောဂါရှိသူများမှာလဲ ဒီလို ပြသနာများ ကြုံရ​လေ့ရှိတတ်​ပါတယ်​..တစ်​စုံတစ်​ခု​ကြောင့်​ ထိခိုက်​မိပြီး အ​ရေပြားထိခိုက်​ခြင်း၊ ​ယောင်​ခြင်း ၊ ပြတ်​ရှခြင်း​တွေမှာလည်း အာရုံ​ကြောပါသွားပါကလည်း ထုံကျဉ်​တတ်​ပါတယ်​..
လူတိုင်း ထုံကျဉ်​ခြင်းကို ခံစားဖူးကြပါလိမ့်​မယ်​..သို့​သော်​ မိမိဟာ သာမန်​ အကြာကြီးထိုင်​မိတာ ၊ ​လက်​​မောင်း​ပေါ်အိပ်​မိတာမျိုး​ကြောင့်​ ထုံကျဉ်​တာမဟုတ်​ပဲ တစ်​ခုခု​ကြောင့်​ ဦး​ခေါင်း၊ လည်​ပင်းနဲ့. ​နောက်​​ကျော​တွေမှာ ထိခိုက်​ထားဖူးတာမျိုး​ကြောင့်​ ထုံကျဉ်​မယ်​၊ ထိမှန်း ကိုင်​မှန်းမသိတာမျိုး ဖြစ်​မယ်​၊ ခဏ သတိ​မေ့သွားတာမျိုး၊စကားလုံးမကွဲခြင်း၊​​ခေါင်း​နှောက်​ခြင်း၊အမြင်​အာရုံဝါးခြင်း၊​​ခြေလက်​အားနည်းခြင်း၊ ဆီးဝမ်းမနိုင်​ခြင်း၊ကိုယ်​လက်​နာကျင်​ခြင်း​​တွေတို့နဲ့ တွဲပြီး တစ်​စုံတစ်​ရာ ရှိခဲ့မယ်​ဆိုပါက ဆရာဝန်​နဲ့ ပြပြီး ​ကုသသင့်​ပါတယ်​…
သို့မှသာ လိုအပ်​​သော ခန္ဓာကိုယ်​ ကြံ့ခိုင်​မှုစစ်​​ဆေးခြင်း ဓာတ်​ချို့တဲ့မှု စစ်​​ဆေးခြင်း၊ အာရုံ​ကြောနဲ့ဆိုင်​​သော ​လေ့ကျင့်​မှုများ ပြုလုပ်​ခြင်း​တွေအပြင်​ဓာတ်​မှန်​ရိုက်​ခြင်း၊ ​သွေး​ကြောဓာတ်​မှန်​ကြည့်​ခြင်း၊ CT scan ရိုက်​ခြင်း၊ ultrasound ကြည့်​ခြင်း အစရှိတဲ့အရာ​တွေနဲ့ မိမိ၏ ကျန်းမာ​ရေးပြသနာကို ​သေချာအ​ဖြေရှာနိုင်​မှာ ဖြစ်​ပါတယ်​
မိမိထိခိုက်​ထား​သော၊ အားနည်း​သော အစိတ်​အပိုင်း(သို့)​ရောဂါနဲ့ လိုက်​ပြီး လိုအပ်​​သော ကုသမှု​တွေပြုလုက်​ရမှာ လူတစ်​ဦးချင်းစီလိုက်​ပြီး ကုသရ​သော နည်းလမ်းများ၊​ဆေးစစ်​ခြင်းများနဲ့ ​ပျောက်​ကင်းမှု ​နှေးခြင်း မြန်​ခြင်း​တွေဟာ ကွဲပြားသွားမှာ ဖြစ်​ပါတယ်​..
ဒါ​ကြောင့်​ မိမိဟာ အမြဲ သတိချပ်​​နေမှသာ မိမိရဲ့ ဖြစ်​လာမယ့်​ ​ရောဂါများ အန္တရာယ်​များကို ကာကွယ်​နိုင်​မှာ ဖြစ်​ပါတယ်​…
ကျန်းမာ သန်​စွမ်းပြီး စိတ်​သွားတိုင်းကိုယ်​ပါနိုင်​​ကြပါ​စေလို့ ​တောင်းဆု ​မေတ္တာပြုလျက်​….